Blockchain Izindaba 31 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Januwari 31, 2018 admin
Blockchain Izindaba 31 Januwari 2018
Japanese imiyalezo giant Line ukuqalisa exchange cryptocurrency
enkulu yamiyalezo Japan umemezele – izinhlelo zayo uqale futhi ukuqhuba exchange cryptocurrency, ukuba ivunyelwe ngaphakathi isicelo yayo wengxoxo okungukuthi ikuyo yonke indawo phakathi yayo 200 million abasebenzisi asebenzayo njalo ngenyanga emhlabeni wonke.
Uhlelo lokusebenza wengxoxo Tokyo ezisekelwe eyiqinisekisile ukuthi bafaka isicelo Financial Services Agency (FSA) - Umlawuli Japan zezimali - ukubhalisa futhi ukuqalisa exchange cryptocurrency. Isicelo okwamanje ingaphansi kokubuyekezwa.
mzamo imiyalezo likaGoliyathi ukunikela cryptocurrency ukuhweba iza eceleni kwethulwa inkampani entsha ebizwa nge Line lwezezimali, neliyoba lokumba anikeza izinkonzo zezimali kubasebenzisi.
Line lwezezimali kulandela kakade-ethandwa mobile ukudluliswa kwemali kanye isevisi yokukhokha Line Line sika Pay, isevisi inikwe amandla ngaphakathi uhlelo lokusebenza Line sika. Ngo 2017, Line pay isipikili 40 million abasebenzisi ababhalisiwe jikelele nge yonyaka kuthengiselana ivolumu esingeqile ¥ 450 bhiliyoni ($4.1 bhiliyoni).
Bitcoin exchange Huobi kuzovula US ehhovisi
Huobi China-based, ngaphambili omunye cryptocurrency Ukuhwebelana ngobukhulu kuleli, uhlela ukwethula kwehhovisi e-San Francisco.
Chief Strategy Officer Cai Kailong wathi “Huobi ifuna sikhule omhlaba… U.S. kuyoba sigxile njengamanje.”
Huobi yakha ekomkhulu entsha endaweni Silicon Valley, ngazo push njengoba omunye omatasatasa, ngokusho kokhulumela i-inkampani.
Ngenyanga edlule, Huobi yamemezela kwathiwa ne inkampani utshalomali SBI Iqembu ukuqalisa pair of cryptocurrency Ukuhwebelana Japan ukuze ngamasevisi yen ezisekelwe.
SBI Zezimali Virtual futhi Huobi Japan ungazange imemezele noma yimuphi migoqo ngokuqinile ukuqalisa abafanele.
wezeziMali Korea: Ayikho izinhlelo lokuvala cryptocurrencies
wezeziMali Korea wathi uhulumeni ayinakho izinhlelo shaqa cryptocurrency zokuhweba, izindaba wamukelekile zimali ngikhathazekile ngokuthi iziphathimandla kusihambele kuze kufike isinyathelo China aqinile okuvimba virtual uhlamvu lwemali ezisekelweni.
Amazwana ngu Kim Dong-yeon ngoLwesithathu kuza njengoba abahwebi ekhaya emhlabeni wonke ziye spooked ngezimpendulo engqubuzanayo ezivela ezikhulwini zikahulumeni e-South Korea, isikhungo enkulu cryptocurrency ukuhweba, ukuthi Seoul wayehlela lokuvala wendawo digital uhlamvu lwemali Ukuhwebelana.
"Akukho ngenhloso ukuvimbela noma wokufihla cryptocurrency (emakethe),"UKim wathi, ukungeza umsebenzi kahulumeni ngokushesha ukulawula Ukuhwebelana.
Ukugxilisa ngenhloso Seoul sika ukoma ngezikulufo on emakethe kabanzi itsatfwe njengentfo opaque futhi okuyingozi by imigomo global, amasiko wezwe ngaphambili ngoLwesithathu wakumemezela ayesithole cryptocurrency emthethweni exchange angaphandle ukuhweba licela $600 abayizigidi ezingu.
"Customs inkonzo liye labizwa ubuka emthethweni exchange angaphandle ukuhweba usebenzisa cryptocurrency njengengxenye kahulumeni umsebenzi amandla,"Kusho.
izinhlelo New York edolobheni ...
Binance eselungela en ...
Thumela Previous:Uba kanjani umthuthukisi blockchain
Thumela Landelayo:Kanjani ukuqhuba ICO eSwitzerland